कोरोनाले झनै बढायो क्यान्सर पीडितका ‘पीडा’ – Health Post Nepal
कोरोनाले झनै बढायो क्यान्सर पीडितका ‘पीडा’
२०७८ माघ २१ गते ११:४२
काठमाडौं – समयमै क्यान्सर पत्ता लागेमा निको पनि सम्भावना बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन्। क्यान्सर भनेको शरीरको कुनै पनि भागलाई असर गर्ने रोगहरूको ठूलो समूहको लागि प्रयोग गरिने शब्द हो, जसलाई ट्युमर पनि भनिन्छ। क्यान्सरमा असामान्य कोशिकाहरूको द्रुत निर्माण हुन्छ, जुन बिस्तारै शरीरभरि फैलिन्छ। जसको उचित समयमा उपचार नगर्दा मानिसको ज्यानसमेत जान सक्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर हुने मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये क्यान्सर एक हो। सन् २०२१ मा मात्र यस रोगबाट लगभग २ करोड मानिस प्रभावित भएका छन् भने एक करोडले ज्यान गुमाएका छन्। तथ्याङ्कका अनुसार मानिसमा स्तन, फोक्सो, कोलन, प्रोस्टेट, छाला र पेटको क्यान्सर बढी देखिन्छ। अहिले क्यान्सर रोगीहरुका लागि कोरोना संक्रमण झनै ठूलो चुनौती बनेको छ।
फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिच्युट, गुरुग्रामको मेडिकल ओन्कोलोजीका वरिष्ठ निर्देशक डा. नितेश रोहतगीका अनुसार कोभिड-१९ महामारीका कारण लकडाउन खुकुलो भएपछि क्यान्सरको उपचार र निदानको स्तरमा धेरै परिवर्तन आएको छ। कोभिड भन्दा पहिले स्तन, अण्डाशय र कोलोरेक्टल क्यान्सरका केसहरू प्रारम्भिक चरणमा पत्ता लागेर निको हुने गरेको थियो। तर अहिले स्टेज-३ र स्टेज-४ का बिरामीहरू अस्पताल पुगिरहेका छन्।
धेरैजसो बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यमा केही गडबड भएको महसुस गरे पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमण हुने डरले अस्पताल जान र चिकित्सकसँग सल्लाह गर्न नजाने गरेको बताउने गरेका उनले बताए। फलस्वरूप, उनीहरुको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रँदै गएको र उपचार तथा निदानमा भएको ढिलाइले निको हुने अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ। साथै यसबाट उपचार खर्च बढ्नुका साथै उपचारबाट उत्पन्न हुने साइड इफेक्ट पनि थप जटिल बन्दै गएको छ।
डा. नितेश भन्छन्, ‘अस्पताल बिरामीको आवत-जावतका लागि सुरक्षित ठाउँ बनिरहोस् भन्ने म आशा गर्छु। लक्षण देखिने बित्तिकै बिरामीहरूले आफ्नो उपचारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन र डाक्टरहरूसँग प्रत्यक्ष वा सम्भव नभए भर्चुअल आधारमा परामर्श गरिहाल्नुपर्छ।’